आयोगलाई दिए ओली र प्रचण्ड समूहले जवाफ, कसले के भने ? Canada Nepal
आयोगलाई दिए ओली र प्रचण्ड समूहले जवाफ, कसले के भने ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माग गरेअनुसार नेकपाको दुवै समूहले पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विवादबारे जवाफ दिएका छन् । यसअघि आयोगले सात दिनभित्र जवाफ दिन दुवै समूहलाई भनेको थियो ।
सोहीअनुसार नेकपाको ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले जवाफ पठाएका हुन् । प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात सत्तारुढ नेकपा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । दुवै समूहले आफू नै नेकपाको आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
आयोगलाई कसले के भने ?
पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगलाई दुवै समूहले जवाफ दिएका छन् । ओली समूहले नेकपा विभाजन नै नभएको जवाफ पठाएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पार्टीको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष आफू रहेको र आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी कायम रहेको भन्दै ओलीले प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष र माधवकुमार वरिष्ठ नेता कायम रहेको आफ्नो जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
तर, प्रचण्ड समूहले भने आयोगले मागेका कागजात र विवरण यसअघि नै पठाइसकेको जवाफ दिएको छ । पार्टीको आधिकारिताविवाद टुंग्याउँदा संवैधानिक अंगको धर्म नबिर्सिन आयोगलाई प्रचण्ड समूहले सचेत गराएको छ ।
यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । दुवैले नेकपाको वैधता आफूले पाउनु पर्ने माग गर्दै आयोगमा विभिन्न कागजात पठाइरहेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्नो समूहमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने ओली समूहले पार्टीको विधानत पहिलो वरीयताको अध्यक्ष र महासचिव विनाका बैठकहरूको निर्णय वैधानिक नरहने भन्दै आफूहरू आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् । सोहीअनुुसार निर्वाचन आयोगले पनि चुनावको तयारी थालेको बताइएका बेला नेकपाको विवाद यथावत रहेको छ ।
पौष २९, २०७७ बुधवार १८:०३:१७ बजे : प्रकाशित